Ny tahan'ny Trio azo tsapain-tanana Pepephone misy amin'ny vidiny tsara indrindra | Androidsis
Pepephone dia iray amin'ireo mpandraharaha farany teo amin'ny tsena Espaniôla. Saingy na eo aza ny fandaniana fotoana kely dia efa nahavita nanao lavaka teo amin'ny tsena izy ireo. Ny lakileny dia ny sarany mora vidy, tena manintona ary ireo tolotra maro karakarain'izy ireo matetika. Amin'izany fomba izany dia misy foana ny sarany mahaliana anao. Misy zavatra miverina indray.
satria Pepephone dia mitondra antsika ny tahan'ny Trio Inimitable amin'ny fampiroboroboana, miaraka amin'ny fihenan'ny vidiny. Izy io dia iray amin'ireo sarany malaza indrindra sy feno, ka azoko antoka fa maro aminareo no mahaliana azy indrindra. Vonona hahalala an'ity fampiroboroboana ity?
Noho ireo karazana tolotra ireo dia afaka nanao lavaka teny an-tsena izy ireo. Ary ankehitriny, manana ny iray amin'ireo sarany tsara indrindra aminay izahay misy amin'ny vidiny lafo. Voalohany indrindra dia milaza aminao izahay hoe inona no ao anatin'io taha io sy ny fepetra ao. Azonao jerena raha mifanaraka amin'izay tadiavinao izany.
1 Ny tahan'ny Trio tsy mitovy amin'ny Pepephone
2 Ahoana ny fomba hananana ny tahan'ny Pepephone Trio Inigualable
Ny tahan'ny Trio tsy mitovy amin'ny Pepephone
Ity taha ity dia manome antsika tsipika finday roa, izay hanana toe-javatra mitovy amin'ny fotoana rehetra. Manolotra anay angona finday 19 GB, vola mihoampampana, izay hanome antsika ny fahafaha-mivezivezy araka izay tadiavintsika mandritra ny volana. Mety raha mijery be dia be amin'ny findainao ianao dia tsy mila miahiahy momba ny fanjifana angona amin'ny fotoana rehetra.
Ho fanampin'io, manana antso tsy voafetra miaraka amin'ny tsipika finday roa izahay. Safidy iray manome antsika fahalalahana betsaka ary mety izany raha olona mila miantso betsaka amin'ny faran'ny volana isika. Tsy ho olana velively ny fandrakofana finday, satria i Pepephone dia mampiasa ny fandrakofana ny Movistar, Orange ary Yoigo, mba hanananao fambara foana amin'ny telefaoninao.
Ny tahan'ny Trio Inigualable dia tsy mampiditra ireo tsipika finday roa ireo ihany, fa hitantsika ihany koa Internet ho an'ny tranontsika. Izy io dia fifandraisana 100mm symmetrika, izay manome antoka antsika faingana amin'ny fifandraisana Internet.
Ity fampiroboroboana Pepephone ity dia a safidy tsara ho an'ny tanora miara-monina ary te hanana fifandraisana Internet tsara any an-trano izy ireo, ary koa laharana finday roa misy data sy antso maro. Arak'izany dia takatrao amin'ny taha iray ny serivisy lehibe indrindra sy ireo izay ampiasainao indrindra. Mety ihany koa ho an'ny fianakaviana mila fifandraisana ao an-trano, saingy mampiasa data maro izy ireo ary miantso minitra amin'ny findainao.
Ohatrinona ny vidin'ny Trio Rate tsy manam-paharoa? Ny sandan'ity sarany ity dia 58,90 euro isam-bolana, noho ity fampiroboroboana ity. Raha raisina ireo tolotra ampidirina ao dia vidiny mirary tokoa izy io. Amin'ity tranga ity dia manana fijanonana mandritra ny 12 volana amin'ity fampiroboroboana ity izahay.
Na dia manana safidy hisafidy amin'izany aza ny mpampiasa. Io dia mety ho ampifanaraho amin'io faharetana io ny taha 12 volana, mba hitsimbinana ny sandan'ny fisoratana anarana. Raha, etsy ankilany, tsy te hanana faharetana ianao dia afaka misafidy an'ity safidy ity, saingy mila mandoa ny saram-pisoratana anarana ianao, izay 90 euro amin'ity tranga ity.
Ahoana ny fomba hananana ny tahan'ny Pepephone Trio Inigualable
Raha liana amin'ny fahazoana io taha io ianao dia tsotra be izany. Mandehana fotsiny amin'ity rohy ity. Ao no ahitanao ny fampahalalana rehetra momba azy, mba hahafahanao mazava momba ny fepetra rehetra sy izay tafiditra ao. Eo ianao dia afaka manatanteraka ny fandraisana ny tahan'ny. Mila manaraka fotsiny ireo dingana aseho eo amin'ny efijery ianao.
Noho izany, afaka minitra vitsy dia azonao atao ny mandray io tahan'ny Pepephone io amin'ny vidiny tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Mpikirakira telefaona » Nihena izao ny tahan'ny Trio tsy azo avela Pepephone
Alefaso ny rohy mankany amin'ny yoigo
Sivanina ny antsipirian'ny Vivo Nex sy Nex S